Isicelo seVisa yaseIndiya | Isicelo se-Visa yaseIndiya | India Visa ekwi-Intanethi
Yintoni iSicelo seVisa yaseIndiya?
Urhulumente wase-India ufuna ukuba bonke abantu bamanye amazwe abafuna ukungena e-India, bangenise i-Indian Visa Application. Le nkqubo yokufayilwa kwesicelo inokwenziwa ngokundwendwelwa ngumzi wommeli waseIndiya okanye ngokugcwalisa Isicelo se-Visa yaseIndiya kwi-Intanethi kule webhusayithi.
Isicelo se-Visa yaseIndiya kukuqala kwenkqubo yokufumana iziphumo zesigqibo se-India Visa. Isigqibo seIndiya seVisa kwisininzi samatyala siyathandeka kubafaki-sicelo.
Ngubani ekufuneka egcwalise isicelo seIndiya seVisa?
Ezo ndwendwe zizayo eIndiya njengeendwendwe, okanye ngeenjongo zentengiso okanye zonyango zinokungenisa kunye nesicelo seVisa seIndiya kwi-Intanethi kwaye ziqwalaselwe ukungena eIndiya. Ukugcwalisa i-Visa Isicelo seIndiya ngokwayo akuniki mvume yokungena eIndiya.
Amagosa okufuduka aqeshwe nguRhulumente wase-India athathe isigqibo sesicelo se-Visa yase-India esekwe kulwazi olunikezwe ngabenzi-sicelo kunye nokutshekishwa kwabo bangaphakathi.
Abakhenkethi abaya eIndiya befika phantsi kwale Uhlobo lweVisa oluchazwe apha Kufuneka ugcwalise isicelo seIndiya yeVisa.
Isicelo seVisa yaseIndiya kwi-Intanethi okanye kwi-eVisa India iyafumaneka phantsi koluhlu olubanzi:
India iTourist Visa
IIndia eBusinss Visa
I-Indiya ye-eMedical Visa
I-Visa yase-India eMendical
Luluphi ulwazi olufunekayo kwiSicelo seVisa saseIndiya?
Ifom ngokwayo ichanekile kwaye kulula ukuyigqiba kwimizuzu embalwa. Kukho ulwazi olufunekayo kubafakizicelo phantsi kwezi ntlobo zilandelayo:
Iinkcukacha zebhayilo zomhambi.
Iinkcukacha zencwadana yokundwendwela.
Imbali yolwaphulo-mthetho oludlulileyo.
Iinkcukacha ezongezelelweyo ziyafuneka kuxhomekeke kuhlobo lwe-visa.
Ifoto yobuso kunye nekopi yepasipoti iyabuzwa emva kokuba intlawulo yenziwe.
Ndingasigqiba nini isicelo seIndiya iVisa?
Kuya kufuneka ugcwalise isicelo se-Visa yaseIndiya ubuncinci kwiintsuku ezine ngaphambi kokungena kwakho eIndiya. I-Visa yase-India inokuthatha iintsuku ezintathu ukuya kwezine zokuvunywa, kungoko kufanelekile ukufaka isicelo kwiintsuku ezi-4 ngaphambi kokungena eIndiya.
Kuthatha ixesha elingakanani ukugqibezela isicelo se-Visa yaseIndiya?
Isicelo se-India Visa sithathe imizuzu emi-3-5 yokugcwalisa ngaphambi kokwenza intlawulo kwi-Intanethi. Emva kokuba intlawulo igqityiwe, kuxhomekeke kubume bomfaki sicelo kunye nenjongo yokutyelelwa, umfaki sicelo unokucela ulwazi olongezelelweyo.
Olu lwazi longezelelweyo lukwagqitywa kwimizuzu engama-2-3. Ukuba kukho nayiphi na imicimbi ekugcwaliseni isicelo se-intanethi, ungaqhagamshelana neDesika yoNcedo kunye neQela lokuXhasa abaThengi kule webhusayithi usebenzisa i Qhagamshelana nathi unxibelelwano.
Zeziphi izinto ezifuna ukubonwa kwangaphambili okanye iimfuno zokugcwalisa i-India Visa application online?
a) Ipasipoti okanye imfuneko yesizwe:
Kuya kufuneka ubengomnye we amazwe afanelekileyo ezivunyelwe nguRhulumente wase-India ukuba I-eVisa India ifanelekile.
b) Injongo yesizathu:
Enye into efunekayo ukuze ugcwalise isicelo seVisa yaseIndiya kwi-Intanethi yeza enye yezi njongo zilandelayo:
Ukutyelela ngeenjongo zokhenketho, ukuDibana kweNtsapho kunye nabaHleli, iNkqubo yeYoga, ukubona ngokubona, Umsebenzi wamavolontiya kwiXesha elifutshane.
Ukuza kuhambo loRhwebo noRhwebo, ukuThengisa kunye nokuThengwa kweMpahla okanye zeeNkonzo, ukuHamba iiNdibano, ukuya eziNdibanweni, ii-Fairs zoRhwebo, iisemina, inkomfa okanye nawuphi na omnye umsebenzi weShishini, wokuRhweba.
Unyango lonyango lomntu okanye unyango njengoMmeli woNyango lomntu ophethwe lonyango.
c) Ezinye izinto ezifuneka ngaphambili:
Ezinye iimfuno ngaphambi kokugqiba isicelo se-Visa yaseIndiya kwi-Intanethi zezi:
Ipaspoti esebenza iinyanga ezi-6 ngexesha lokungena eIndiya.
Ipasipoti enamaphepha amabini angenanto ukuze igosa lezothutho lisitampu kwisikhululo seenqwelomoya. Qaphela, ukuba i-Visa yase-India iziswe emva kokugcwalisa isicelo se-India Visa kwi-Intanethi ayifuni ukuba undwendwele i-India kwi-afisa isitampu seVisa. Amaphepha amabini angenanto ayimfuneko kwisikhululo seenqwelomoya ukuze kungenwe kwaye kuphume isitampu kwipasipoti yakho.
Indlela yokuhlawula enje ngesheke, ikhadi lebhanki, ikhadi letyala okanye iPaypal.
Ngaba ndingakwazi ukufaka iqela okanye usapho i-India Visa Isicelo?
Isicelo se-Visa yase-India, nokuba ithini na indlela yokugqitywa, nokuba ikwi-Intanethi okanye kwindlu yozakuzo yaseIndiya, kufuneka kugqitywe umntu ngamnye ngokwahlukeneyo ngaphandle kweminyaka yobudala babo. Akukho qela lesicelo se-Visa yeNdiya elikhoyo kwi-intanethi okanye ngaphandle kweintanethi.
Nceda uqaphele ukuba kuya kufuneka ufake isicelo somntu ngamnye kwipasipoti yakhe, ngenxa yoko umntu ozelwe ngokutsha akanako nokuhamba kwipasipoti yomzali okanye yomgcini.
Kwenzeka ntoni emva kokugqiba isicelo seVisa yaseIndiya?
Xa isicelo se-Visa yase-India singenisiwe siyasebenza kwinkqubo kaRhulumente waseIndiya. Abahambi banokubuzwa imibuzo eyongezelelweyo okanye ukucaciswa okunxulumene nohambo lwabo okanye banokukhutshwa iVisa yaseIndiya ngaphandle koncedo olongezelelweyo.
Eminye yemibuzo eqhelekileyo ebuzwa inxulumene nenjongo yohambo, indawo yokuhlala, ihotele okanye ireferensi eIndiya.
Nguwuphi umahluko phakathi kwe-India Visa Online Isicelo kunye nePhepha lesicelo?
Akukho mehluko phakathi kwezi ndlela zimbini ngaphandle kokwahluka okuncinci.
Isicelo se-Visa yaseIndiya kwi-Intanethi senzelwe kuphela indawo yokuhlala ephezulu yeentsuku ezili-180.
Isicelo se-Visa yaseIndiya esifakwe kwi-Visa yabakhenkethi yiminyaka emi-5 ubuninzi.
Isicelo seVisa yaseIndiya kwi-Intanethi sivumelekile kwezi njongo zilandelayo:
Uza kuNyango lwezoNyango okanye uhamba nesigulana esiza unyango.
Ukuba injongo yohambo lwakho ayisiyiyo enye engaphezulu, kuya kufuneka ufake iphepha elisekwe, usetyenziso oluqhelekileyo lwe-Visa yaseIndiya eyinkqubo edala kwaye ihlala ixesha elide.
Zeziphi izibonelelo zokugqiba isicelo seVisa yaseIndiya kwi-Intanethi?
Izibonelelo zeSicelo seVisa yaseIndiya kwi-intanethi zezi zilandelayo:
I-Visa ihanjiswa nge-imeyile ngombane, ngenxa yoko igama le-eVisa (Visa ye-elektroniki).
Ukucaciswa okongeziweyo kunye nemibuzo ebuzwa nge-imeyile kwaye ayifuni kudliwano-ndlebe kwiNdlu yozakuzo yaseIndiya okanye kwiOfisi yaseMelika.
Inkqubo ikhawuleza kwaye igqitywe kwiimeko ezininzi kwiiyure ezingama-72.
Ngaba kufuneka undwendwele indawo yaseIndiya emva kokuba ugqibile ukufaka isicelo seIndiya eVisa kwi-Intanethi?
Hayi, awunyanzelekanga ukuba undwendwele i-Indian Embassy okanye i-Indian High Commission emva kokuba ugqibile ukwenza isicelo se-Visa yaseIndiya kwi-Intanethi.
I-Visa ye-elektroniki ye-elektroniki eza kunikezelwa kuwe, ziya kurekhodwa kwinkqubo yekhompyuter. Uyacelwa ukuba ugcine ikopi ethambileyo kwifowuni yakho okanye kwimeko yokuba ibhetri yefowuni yakho isweleke, kuya kuba luncedo ukugcina iphepha eliprintiweyo kwi-Visa yakho yase-Indiya okanye eVisa yaseIndiya. Ungaya kwisikhululo seenqwelomoya emva kokufumana i-eVisa yaseIndiya.
Ingenziwa njani intlawulo yokwenza isicelo seVisa yaseIndiya kwi-Intanethi?
Kukho ngaphezulu kweemali ezili-133 ezamkelweyo kule webhusayithi. Ungahlawula kwi-Intanethi, okanye utshekishe kumazwe athile, ngekhadi likaDebit, ikhadi letyala okanye iPayPal.
UNGASENZI nini isicelo se-Visa yaseIndiya kwi-Intanethi?
Zithini izithintelo kwi-India Visa application online?
Ukuba ulungele i-eVisa India kwaye uthathe isigqibo sokugcwalisa i-Visa ye-Intanethi yesicelo kwi-Intanethi, ke kuya kufuneka uqaphele ukusikelwa umda.
I-Visa yaseIndiya eya kuthi ithunyelwe kuwe emva kokugqiba isicelo se-India Visa kwi-Intanethi okanye kwi-eVisa India Isicelo sifumaneka ngokufumana indawo ezintathu kuphela ngexesha labakhenkethi, usuku lwe-30, unyaka o-1 kunye neminyaka emihlanu
I-Visa yase-India egcwaliswe kwi-intanethi iya kukubonelela ngeVisa yokuThengisa ye-Indiya yexesha elinye loku-1 unyaka kunye nokungenela okuninzi.
Unyango lwe-Visa efumaneka kwi-Visa ye-Intanethi kwi-Intanethi okanye kwi-eVisa India iyafumaneka ngeentsuku ezingama-60 ngeenjongo zonyango. Ivumela amangenelo amathathu ukuya eIndiya.
I-India Visa Isicelo kwi-Intanethi ekubonelela nge-eVisa yaseIndiya, ziya kuvunyelwa iseti encinci yamachweba okungena Ngomoya, kwizikhululo zeenqwelo moya ezingama-28 kunye nezibuko ezi-5. Ukuba ucwangcisa ukutyelela e-Indiya ngendlela, ke kuya kufuneka ungasenzi isicelo seVisa ukuya eIndiya usebenzisa le webhusayithi usebenzisa iIndia Visa Application application kwi-intanethi.
I-eVisa India efunyenwe ngokugcwalisa isicelo se-Visa yase-Indiya kwi-Intanethi ayifanelekanga ukuba ityelele indawo zokugcinwa komkhosi. Kuya kufuneka ukuba ufake isicelo sePemithi yeNdawo eKhuselweyo kunye / okanye iPemethe yeNdawo esiThintelweyo.